जापानी ओरिगेमी / पेपर तह | Experience Japan
› ब्लग Nepali › जापानी ओरिगेमी / पेपर तह
जापानी ओरिगेमी / पेपर तह
ओरिगेमी संभवतः सबैभन्दा जापान सांस्कृतिक गतिविधिहरु को सबै को चिरपरिचित छ। यो कहाँ कागज जनावर, फूल वा मान्छे सहित दायरा आकारहरू सिर्जना गर्न जोडेको छ एक कला रूपमा अभ्यास छ।
छैटौं शताब्दीमा कागज कोरिया र चीन देखि जापान बौद्ध भिक्षुहरूले द्वारा शुरू भएको थियो। यो धेरै महंगा थियो र पहिलो बोट फाइबर संग गरिएको थियो। मात्र विशेष बिदा वा समारोह ओरिगेमी सजावट थियो। ओरिगेमी प्रारम्भिक परम्परा शुभकामना लागि महंगा उपहार सँगसँगै भन्ने परम्परागत जापानी विवाह र विशेष ओरिगेमी आकारहरू लागि पुतलीहरु बनाउने समावेश गर्नुहोस्। चाँडै नै यस राष्ट्रिय पछिल्लो समय भयो र अब सबै दुनिया भर अभ्यास छ।
ओरिगेमी शब्द संग्रह:
Hanshi: हातले बनाएको कागज
ओरिगेमी तपाईं घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ
त्यो:1 ओरिगेमी कागज भेला (र शासक तपाईं नयाँ हो भने)। सामान्य कागज ठीक छ, तर तपाईं यो एक वर्ग को आकार मा छ सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यो वर्ग बडा, यो सजिलो तह हुनेछ। तपाईं भन्दा शिल्प पसलहरुमा ओरिगेमी कागज पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईं यो पतली र थप लचिलो छ गर्नेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं अक्सर अनलाइन थप परंपरागत सजाया कागज पाउन सक्नुहुन्छ।
2. निर्देशनहरू ओरिगेमी डिजाइन भनेर गुना गर्न चाहनुहुन्छ लागि तयार छ। म यस्तो http://www.origami-instructions.com/ रूपमा अनलाइन उदाहरण जाँच थियो। यी कदम एक ओरिगेमी प्रशंसक कसरी गुना रूपरेखा जाँदैछन्।
3. माथिको तह कागज को सफेद पक्ष संग सुरु गर्नुहोस्। (तपाईं कागज को एक रंग टुक्रा छैन भने, तपाईँले पहिला आफ्नो डिजाइन आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि निर्देशन जारी।) चौडाई मा तल एक सेन्टिमिटरले साथ गुना। तपाईं शासक छ भने, तपाईं थिचिएको किनाराको साथ शासक चलिरहेको द्वारा कठिन थिच्न सक्नुहुन्छ।
4 त्यसैले रंग पृष्ठ अब देखाइएको छ भन्दा कागज फ्लिप। आफ्नो नयाँ प्रालंब फैलाउनु छैन।
5 फेरि चौडाई मा तल एक सेन्टिमिटरले साथ गुना। यो तपाईं पछ्याउन लागि आफ्नो पहिले गुना गाइड सिर्जना गर्नेछ रूपमा सजिलो हुनेछ। तपाईं शासक छ भने, तपाईं फेरि किनाराको थिच्न सक्नुहुन्छ।
6 सेतो पक्ष देखाइएको छ त फेरि माथि कागज फ्लिप। फेरि अर्को लाइन गुना।
7 को सजाया साइन देखाइएको छ सम्म माथि फ्लिप। अर्को लाइन गुना। सबै सम्पूर्ण पृष्ठ पट्टी मा जोडेको छ सम्म यी कदम दोहर्याउँदै राख्नुहोस्।
8 छेउमा देखि एक सेन्टिमिटरले चिन्ह तिर, नयाँ गुना बनाउन। तपाईं चाहनुहुन्छ भने शासक प्रयोग गर्न सम्झनुहोस्। तपाईं एक बच्चा यो गर्दै भने, तिनीहरूले stapled तीर गर्न घनिष्ठ अन्त मनपर्छ।
तपाईंको प्रशंसक बनाएको छ भनेर9अप प्रत्येक पक्ष खोल्नुहोस्!
ओरिगेमी बारेमा मजा तथ्य:
1 ओरिगेमी शैलीहरू र प्रविधी विस्तार गर्न जारी। लोकप्रिय बनेका छन् कि कठिन प्रविधी संग थप शैलीहरू हालै जटिल ओरिगेमी, गणितीय ओरिगेमी, मड्यूलर ओरिगेमी, भिजेको तह ओरिगेमी र ओरिगेमी tessellations समावेश गर्नुहोस्।
ओरिगेमी को2आजको अनुहार Yoshizawa अकीरा छ। उहाँले ओरिगेमी को स्वीकार grandmaster र आधुनिक रचनात्मक ओरिगेमी पिता छ। उहाँले सँगै ज्यामिति र कला FUSING लागि ज्ञात छ। Yoshizawa आत्म-सिकाइएको थियो र त्यो एक बच्चा थियो जब एक केटी उसलाई कागज डुङ्गा दिंदा ओरिगेमी रुचि भयो।
3. जापान Samurais noshi रूपमा चिनिने प्रत्येक अन्य ओरिगेमी उपहार दिए थियो। यी धेरै पटक कागज जोडेको को टुक्रा देखि माछा को आकार लियो र शुभकामना टोकन छलफल गरेका थिए।
4 एक जापानी पत्नी तपाईं एक हजार कागज क्रेन जोडेको छ भने, तपाईं एक इच्छा प्रदान गर्न सकिएन भनेर कथा छ। त्यहाँ उनले बिरामी परे पछि जसले यो गर्न प्रयास Sadako भनिन्छ केटी को एक सुन्दर कथा छ। तपाईं Sadako कथा पढ्न चाहनुहुन्छ भने, Sadako र हजार कागज क्रेन Elenor Coerr द्वारा एक पुस्तक हो।
5 सबै भन्दा ठूलो ओरिगेमी क्रेन लगभग 82 मीटर वा 268 फिट र 10 इन्च को एक wingspan थियो। सानो ओरिगेमी पृष्ठ धेरै कागज को एक टुक्रा 100 मीटर द्वारा 100 मीटर मापन गर्ने बनाउन सँगै चिपके थिए। यो रेकर्ड हिरोशिमा, जापान मा हिरोशिमा Shudo विश्वविद्यालय मा शान्ति टुकडा परियोजना द्वारा आयोजित छ।
6 सानो गर्न ठूलो बाट! सानो ओरिगेमी क्रेन 1 मिलिमिटर 1 मिलिमिटर को आयाम थियो कि कागज बाहिर गरिएको थियो। सहायक प्रोफेसर Watanabe को क्रेन बनाउन गर्न एक माइक्रोस्कोप र सिलाई सुई प्रयोग गर्न आवश्यक! उहाँले Nigata विश्वविद्यालय, जापान मा यो रेकर्ड पूरा भयो।
7 सबैभन्दा लामो गारलैंड 7000 मीटर मा ओरिगेमी उपाय बनाउनुभयो! त्यो 4.3 किलोमिटर छ! जापान मा हिरोशिमा विशेष समर्थन स्कूल द्वारा सिर्जना गरिएको थियो।
8 छैन ठ्याक्कै ओरिगेमी बेला, जापान अर्को सांस्कृतिक कागज शिल्प भनिन्छ kirigami छ। ओरिगेमी मात्र तह द्वारा यसको आकार बनाउँछ गर्दा, kirigami साथै काटन शामिल। थप जटिल आकारहरू र नकारात्मक ठाउँ संग कला सिर्जना गर्न सकिन्छ। यी कला टुक्रा ओरिगेमी भन्दा बढी नाजुक र निश्चित एक नजर लायक छन्।
9 एक को ओरिगेमी कला फारम आधुनिक स्पिन ओरिगेमी पपअप डिजाइन संग देखा छ। यो 1980 का मा Masahiro Chatani द्वारा सिर्जना गरिएको थियो, र उहाँले र किको Nakazawa यो नयाँ कला को रूप मा प्रतिभा र सुन्दरता प्रदर्शन धेरै पुस्तकहरू छन्।
10 राम्रो अनलाइन तपाईं आफ्नो ओरिगेमी यात्रा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने स्रोत http://www.origami-instructions.com/ मा पाइन्छ। यो अनलाइन tutorials र कार्यशालाओं को एक श्रृंखला तपाईं ओरिगेमी बनाउन आवश्यक कदम र प्रविधी मद्दत छ। YouTube भिडियो हजारौं साथै तपाईंलाई सहयोग गर्न पनि छन्।